Safarka Xalaal ee Azerbaijan - Makhaayadaha - Masaajidyada - Hoteelada Saaxiibtinimada Muslimiinta
Ku dhowaad 99% dadweynaha Azerbaijan waa magac muslim. (Qiyaasaha waxaa ka mid ah 96.9% Muslim, 93.4% (Xarunta Berkley, 2012), 99.2% (Xarunta Cilmi baarista ee Pew, 2009) Dadka intiisa kale waxay u hogaansamaan diimo kale ama kuma jiraan diin, inkasta oo aysan si rasmi ah u matalin. Inta badan dadka muslimiinta ah, dhowrista diinta ayaa kaladuwana oo aqoonsiga muslinka wuxuu u egyahay inuu ku saleysnaado dhaqan iyo qowmiyadeed halkii diinta looga baahnaa Tirada dadka muslimiinta ahi waa ku dhowaad 85% Shiico iyo 15% Sunni ah; kala duwanaanshaha dhaqan ahaan si adag looma qeexin. Azerbaijan waa dalka labaad ee ugu badan Shiicada adduunka marka laga reebo Iran.
Sida laga soo xigtay 2010 Gallup Poll waxay ogaatay 49% dadka reer Azerbaijan inay ku jawaabayaan maya su'aasha ah "Diintu ma qayb muhiim ah ayey ka tahay nolol maalmeedkaaga?", Mid ka mid ah heerarka ugu sarreeya ee waddamada ugu badan ee Muslimiinta ah. Codbixin la qaaday 1998 waxay ku qiyaastay saamiga rumaystayaasha caqliga badan ee Azerbaijan kaliya boqolkiiba 20.
Si tartiib tartiib ah, xilligii fiidkii ee Soofiyeeti, astaamaha dib u soo nooleynta diinta kaliya ma badnayn laakiin waxay ku soo baxeen banaanka. Sida laga soo xigtay ilaha Soofiyeedka, intii lagu jiray dabayaaqadii 1970s ilaa 1,000 guryo si qarsoodi ah loogu tukado ayaa la isticmaali jiray, iyo ilaa 300 oo goobood oo xajka ah ayaa la aqoonsan karaa. Kobacaani wuxuu caddeeyay hordhaca furitaanka dadweynaha ee boqolaal masaajid tobanka sano ee soo socda.
Laga bilaabo dabayaaqadii xilligii Gorbachev, iyo gaar ahaan xorriyadda kadib, tirada masaajiddada ayaa si aad ah kor ugu kacay. Kuwo badan ayaa lagu dhisay taageerada dalal kale oo Islaam ah, sida Iiraan, Cumaan, Iyo Saudi Arabia, kaas oo sidoo kale Qur'aanka iyo macallimiinta diinta ku darsaday dawladaha cusub ee Muslimiinta. Seminar Muslim ah ayaa sidoo kale la aasaasay ilaa 1991. Tirada sii kordheysa ee muslimiinta diinta leh waxay dhalisay in la dhiso in ka badan 2,000 masaajid ilaa 2014.
Gobanimada kadib, sharciyada la xiriira diinta waa cad yihiin. Qodobka 7aad ee dastuurka, Azerbaijan waxaa loogu dhawaaqay dal calmaani ah. Qodobkani wuxuu ku wajahan yahay guriga qodobka 19aad oo leh bayaan ka soocista diinta iyo dawladda iyo sinnaanta dhammaan diimaha sharciga hortiisa iyo sidoo kale astaamaha cilmaaniga ah ee nidaamka waxbarashada gobolka.
Azerbaijan waxay ahayd wadan cilmaaniya. Sahan la sameeyay 1998 ayaa lagu qiyaasay saamiga rumaystayaasha caqliga badan ee Azerbaijan ku dhowaad 7 boqolkiiba, waxyarna ka badan tirada dadka diin laawayaasha ah ee la shaaciyay - ku dhowaad 4 boqolkiiba - iyadoo tirada ugu badan ay ku dhacayso kuwa u haysta in diinta Islaamka ay ka sarreyso qaab nololeed. , iyada oo aan si adag loo ilaalin mamnuucyada iyo shuruudaha, ama qayb aasaasi u ah aqoonsiga qaranka. Daraasad la sameeyay 2010 kaliya kalabar dadka reer Azerbaijan ayaa haa kaga jawaabaya su'aasha ah, "Diintu ma qayb muhiim ah ayay ka tahay nolol maalmeedkaaga?"
Siyaasiyiinta cilmaaniga ah ee Azerbaijan waxay walaac ka muujiyeen kor u kaca diinta Islaamka, laakiin kuwa kale waxay qabaan in Islaamka Azerbaijan uu yahay mid wajiyo badan leh. Islaamku wuxuu ka ciyaaraa oo keliya door aad u xaddidan dhinaca siyaasadda oo kaliya in yar oo dadka ka mid ah ayaa taageerta fikradda ah in la dhiso "amar Islaami ah". Tan waxaa u sabab ah dhaqanka dheer ee cilmaaniyadda Azerbaijan iyo xaqiiqda ah in dhaqdhaqaaqa mucaaradka wadaniyeed uu yahay mid cilmaaniya dabeecad ahaan. Hase yeeshe, sida ay qabaan falanqeeyayaasha qaarkood, mustaqbalka fog, haddii aysan siyaasiyiintu maareynin inay hagaajiyaan xaaladaha nolosha dadka intiisa badan, dadku waxaa laga yaabaa inay muujiyaan sida ay uga xun yihiin diinta Islaamka.
eHalal Safarka Mart > Safarka Xalaal Azerbaijan